Dib u eeg siyaasadaha oggolaanshaha hore iyo tilmaamaha maaraynta isticmaalka.
Dib-u-eegista Oggolaanshaha Kahor waa habka dib-u-eegista adeegyada caafimaadka, qalliinka, iyo caafimaadka dabeecadda qaarkood iyadoo la raacayo shuruudaha ama tilmaamaha la dejiyey. Waxaan isticmaalnaa oggolaansho hore, dib u eegis isku mid ah, iyo dib-u-eegis si loo hubiyo habboonaanta, baahida caafimaad, iyo waxtarka adeegyada daryeelka caafimaadka, habraacyada, iyo tas-hiilaadka la bixiyo. Tan waxaa loo yaqaanaa maaraynta isticmaalka. Waxay hubisaa baahida caafimaad iyo ku habboonaanta daryeelka ka hor inta aan adeegyada la bixin.
Fadlan tixraac Tilmaamaha Caymiska Qaranka iyo / ama Tilmaamaha Caymiska Deegaanka. Ka gaabinta helitaanka oggolaanshaha hore ee loo baahnaa waxay sababi kartaa sheegasho la diiday. Adeegyadu waxay ku xiran yihiin caymis faa'iido, xaddidaadyo, iyo ka-reebis sida lagu qeexay tilmaamaha caymiska qorshaha.
Xusuusin: cusbooneysiinta 2022 ee boggan ayaa soo socota dhowaan. Hoos, fadlan ka hel macluumaadka 2021.
Bixiyeyaashu waa inay ku soo gudbiyaan codsi oggolaansho hore iyada oo loo marayo Boggeena Maareynta Daryeelka, JIVA. Bogga, waxaad ka hubin kartaa u-qalmitaanka iyo heerka oggolaanshaha, daabacaadda waraaqaha oggolaanshaha, iyo codsiyada ku soo gudbi khadka tooska ah 24/7. Wixii khuseeya arrimaha diiwaangelinta ama kaalmada farsamada, kala xiriir Taageerada Xariirka [emailka waa la ilaaliyay].
Xariirka marinka Codso Koontada Xariirka
Dib u eeg tilmaamaha adeegsiga hadda ee aag kasta oo u baahan oggolaansho hore. Liisaskaani waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan ogeysiiska looga baahan yahay isbitaal dhigidda bukaan-jiifka, barnaamijyada bukaan-socodka, iyo shuruudaha oggolaanshaha guud iyo waqtiga kama dambaysta ah. Liisaska Oggolaanshaha Hore ma ahan kuwo loo dhan yahay. Adeegyadu waxay ku xiran yihiin caymiska waxtarka, xaddidaadaha iyo ka-reebitaanka. Fadlan la xiriir Adeegga Macaamiisha si aad u xaqiijiso dheefaha xubinta iyo caymiska. Waxa kale oo aad ka xaqiijin kartaa caymiska Xariirka Maaraynta Daryeelka. Xaddidnaanta caymiska Medicare, fadlan tixraac Tilmaamaha Caymiska Qaranka iyo / ama Tilmaamaha Caymiska Deegaanka.
Adeegyada Caafimaadka iyo Qalliinka
Xulo Nooca Oggolaanshahaaga Hore:
Daaweynta daryeelka caafimaadka maskaxda oo ay ku jiraan barnaamijyada bukaan-socodka bukaan-socodka, falanqaynta habdhaqanka iyo ku-xadgudubka mukhaadaraadka, waxay u baahan karaan oggolaansho ama ogeysiis hore. Haddii aadan hubin in adeeg la daboolay, tixraac tilmaamaha isticmaalka ee adeegyada caafimaadka hab dhaqanka.
Daawooyinka qaarkood, oo ay ku jiraan dawooyinka xirfadleyda la maamulo, waxay u baahan yihiin oggolaansho hore. Raadi macluumaad ku saabsan daaweynta talaabada, maareynta daawada, ama xad dhaafka xadadka. Soo gal liistada hadda ee farmasiyada ku jira shabakadda oo aad ogaatid daawooyinka ku jira liiska dawooyinka.
Oggolaanshaha Hore ee Caafimaadka Jirka
Adeegyada qaarkood, nidaamyada, ama daaweynta waxay u baahan karaan oggolaansho hore. Inta badan adeegyada bukaan-jiifka waa la daboolaa, laakiin dhammaantood ma ahan. Bukaanku waxay u baahan doonaan inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood ee ogolaanshaha hore ee la siiyo. Alaabada caafimaadka, qalabka caafimaadka ee raagaya, iyo daawada jirka loo isticmaalo sidoo kale waxay u baahan karaan ogolaansho hore. Wakiilada adeegga bixiyaha ayaa kaa caawin kara xaqiijinta dheefaha iyo caymiska.
Kheyraad Dheeraad ah iyo Foomam
Haddii aad doorbideyso inaad fakis ku dirtid codsiyadaada oggolaanshaha hore, buuxi foomka ku habboon oo fakis ugu dir lambarka ku qoran foomka. Haddii aadan ku arkin foomka ku habboon liiska, fadlan hubi kan Khayraadka Bixiyaha .
Waxaan u adeegsanaa dhowr ilo si aan u go'aamino bal in faragelinta gaarka ah ay caafimaad ahaan lagama maarmaan tahay. Kiis kasta waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo la adeegsanayo shuruudo ku habboon, sidoo kale iyada oo la tixgelinayo macluumaadka kiisaska shaqsiyeed.
Waxaan ku tiirsan nahay tilmaamaha MCG ee qaran ahaan loo aqoonsan yahay inay yihiin isha koowaad ee talooyinka ku saleysan caddeynta ee ku saabsan daboolista bukaan socodka. Intaa waxaa dheer, waxaan u abuurnay Shuruudaha Caymiska Caafimaadka (CCCs) xaaladaha aan looga hadlin Tilmaamaha MCG. Go'aannada daruuriga ah ee caafimaadka dabeecadda ah waxaan u adeegsanaa heerarka Nidaamka Adeegsiga Daryeelka Daryeelka ee Adeegyada Maskaxda iyo Maandooriyaha (LOCUS), shuruudaha MCG, iyo Shuruudaha Isticmaalka Maandooriyaha Bulshada Mareykanka (ASAM) ee dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha. Waad tixraaci kartaa dukumintiyada LOCUS / CALOCUS ee hoos ku yaal.
CHPW waxay isticmaashaa Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicare (CMS) go'aaminta caymiska qaranka (NCDs) iyo go'aaminta caymiska deegaanka (LCDs), haddii la heli karo. NCDs iyo LCDs waxaa laga heli karaa Noridian, Qandaraaslaha Adeegga ee Medicare ee Washington, ama waxaa laga heli karaa websaydhka CMS. Haddii shuruudaha CMS-ka aan la heli karin, markaa Tilmaamaha MCG iyo / ama CCC-yada CHPW ayaa la adeegsadaa.
Agaasimayaashayada caafimaad waxay tixgelin siinayaan da'da isqorista, xaalada bulshada, xanuunada laxiriira, iyo helitaanka adeegyada bulshada dhexdeeda markay sameynayaan go'aamada dib u eegista isticmaalka. Tilmaamahan waxaa loo heli karaa tixraac xagga hoose ah.
Shuruudaha Caymiska Caafimaadka (oo ay ku jiraan taariikhda oggolaanshaha ugu dambeeya iyo soo koobista isbeddelka)
Xaashida Dhibcaha CALOCUS
Xaashida Dhibcaha LOCUS
Waxa kale oo aad ka heli kartaa shuruudaha khadka tooska ah iyada oo loo marayo Xariirka Maaraynta Daryeelka.
Adeegyada loogu talagalay barnaamij gaar ah waxaa laga yaabaa inaysan noqon wax faa'iido ah. Fadlan ka hubi khadka tooska ah adoo maraya CaafimaadkaMAPS, la xiriir Adeegga macaamiisha, ama la tasho Shabakadaha Macaashka Xubinta.
Taariikhda hadda jirta iyo / ama baaritaanka takhtarka ee xallinaya dhibaatada iyo baahida loo qabo adeegyada la codsaday. Waxaa loola jeedaa hadda lixdii bilood ee la soo dhaafay, ama in dhaweydba waxay kuxirantahay xaalada.
Natiijooyinka shaybaarka khuseeya iyo / ama shucaaca.
Qoraallada la-tashiga takhasuska leh ee khuseeya.
Macluumaadka kale ee muhiimka ah.
Xogta Oggolaanshaha Hore ee 2021
Soo Koobista 2021
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington iyo adeeg bixiyayaasheeda waxay adeegsadaan tilmaamaha daryeelka ee ay qoreen khubarada dhanka daawada iyo caafimaadka habdhaqanka. Tilmaamahan waxay ka caawinayaan bixiyeyaasha inay ogaadaan goorta ay isticmaalayaan daaweynta qaarkood iyo dhibaatooyinka ay tahay inay iska fiiriyaan. Si aad u codsato nuqul ka mid ah shuruudaha loo isticmaalo go'aan qaadashada, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha 7 maalmood usbuucii 1-800-942-0247 laga bilaabo 8 ilaa 8
Kheyraadkaani waxaa ka mid noqon kara Tilmaamaha MCG, Go'aaminta caymiska Medicare, heerarka qaranka, khibradda xirfadlayaal ku takhasusay guddiga, iyo Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee dukumiintiyada dukumiintiyada caymiska caafimaadka. Qiimeeye ku habboon asaaga (agaasime caafimaad, farmashiistaha, ama agaasime caafimaad oo la shaqeeya) ayaa la heli karaa si looga wada hadlo wixii oggolaansho ama diidmo ah.
Su'aalaha Ku Saabsan Nidaamka Dib U Eegista Oggolaanshaha Hore?
Kala tasho page FAQ su'aalaha oggolaanshaha hore.